China Pee mmiri ara ehi bag squeezing igwe emepụta na suppliers | Igwe na-emepụta ihe
Pee mmiri ara ehi akpa afanyekwa igwe
Nke a bụ ụdị igwe plastik ọhụrụ, nke pụrụ iche maka imegharị plastik na ịsa ahịrị, ọ nwere ike dochie igwe igwe mmiri, igwe igwe, mgbe ihe nkiri ahụ si na esemokwu esemokwu dị elu. Mgbe ị na-eme granulu, ọ chọghịkwa compactor.
General imewe echiche dị ka ndị a:
1.squeezing igwe gbọmgbọm adịghị mkpa maka ọgwụgwọ site na 38Crmoal, n'ihi na akụkụ fricton dị n'isi.
Mana choro ọgwụgwọ di oku. (Kpo oku site na 38Crmoal)
2.squeezing igwe gbọmgbọm imewe, na elu, gbọmgbọm a ga-akuakuzinwo ọzọ obere hole.inside oghere banyere 3mm, n'èzí banyere 6mm.
Ya mere, nhazi a nwere ike ijide n'aka na ị gaghị arapara site na ihe onwunwe mgbe ị nwere nnukwu nrụgide n'ime.
3.inside nke na-agbaji igwe gbọmgbọm nwere 5 PC Keyway, (foto bụ ụdị 300, nwee 6 PC Keyway),
a Keyway ọrụ a hụ na-eme ka rawmaterial inupụ n'ihu site ịghasa.
4.the igwe na-ekpochapu ihe ga-abụ nke 38Crmoal, nke siri ike dị elu, Nguzogide abrasion dị mma.
5.squeezing igwe na-ekpuchi ihe eji eme ihe site na abuo-IN-ONE, na-eji ego kacha ala.
6.the ebu oghere nke ịpị igwe nwere ike ịbụ kemeghi
ma ọ bụrụ na-akpali nkọwa, kpọtụrụ na- info@zjgrcmc.com
Igwe a nakweere ụkpụrụ nke akpịrị ịkpọ nkụ, nke bụ ihicha ihe nkiri plastik (ihe nkiri plastik, ihe nkiri ịkọ ihe nkiri, nke a kpara akpa, akpa akpụkpọ anụ, akpa ohere, akpa akpa, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ plastik) ngwa ngwa Ngwa maka ịpịpụta. mmiri dị na plastik. Onwem na rotary ịghasa ngwaọrụ, pụrụ iche reducer, n'ụzọ zuru ezu akpaka akụrụngwa maka piakota na dewatering plastic film, plastic ugbo film mulch, eyi kpara akpa, agwọ akpụkpọ akpa, ohere akpa, ton akpa, mkpa plastic mpempe akwụkwọ n'efu plastic, wdg. Igwe a na - agbaso ụkpụrụ nke akpịrị ịkpọ nkụ na - agbakwunye ya ma jiri ya mee ihe na - emegharị ihe na - emepụta. Squeemepụta na mmiri akpịrị ịkpọ nkụ bụ ngwa ngwa ma mmetụta dị mma. Igwe a dị mfe iji rụọ ọrụ, ịpịpịa na mmetụta akpịrị ịkpọ nkụ nwere ike iru karịa 95%, na mmepụta nwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
1. uniquekpụrụ ịkpọ nkụ nke pụrụ iche na-edozi nsogbu siri ike nke ịda mbà n'ọgwụ ọdịnala;
2. Ezi mpịakọta mmetụta: ihe karịrị 95% ekwe nkwa;
3. Teknụzụ Taiwanese, emere na China, ọnụ ahịa dị oke ọnụ;
4. Akpachapụ anya nke usoro ihe eji arụ ọrụ, ma e jiri ya tụnyere ikpo ọkụ ikuku na-ekpo ọkụ, na-echekwa ike;
akwụkwọ mmepụta ihe imetosi ihe onwunwe afanyekwa igwe
Enweghị usoro ịkụcha igwe
film afanyekwa igwe
300kg / h igwe na-ekpochapu ihe nkiri